Maamulki talyaaniga ee maxmiyadda waxaa gacan siinayay gole la talin ah oo ka koobnaa wadamada kala ah Kolombiya, Indiya, Pakistan, Masar iyo Filibiin. Xilligaas waxaa Dalka lagu dhaqayay axdiga ku taariikheysan 21 November Isla waqtigaas ayuu bilowday geeddi socodka dastuur samaynta Soomaaliya, waxayna waddamadii kor-joogtaynayay maxmiyaddu ay bilaabeen howsha diyaarinta qabyo qoraal Dastuur iyagoo u xilsaaray wakiilkii Hindiya ee Qaramada Midoobay. November dii ayuu Guddigii farsamadu soo bandhigay qabyo-qoraal Dastuur oo hordhac ah kana kooban Qodob, ayna la socoto faallooyin gaaraya bog. Degreeto L. Golihii sharci dejinta waxay marki ugu horreysay kulmeen kii Maarso , waxayna magacaabeen guddi siyaasaddeed oo soo daraaseeyo qaby-qoraalka Dastuurka 22dii Maarso
Waxaa uu guddigii soo diyaariyay qabyo-qoraal Dastuur oo ka kooban qodob, waxaana lagu ogolaaday Sharci L. Waxaa sidoo kale lagu ogolaaday Xeerka Madaxweynaha ee Lamb. Waxaana afti loo qaaday 25tii Agust , waxaa ogolaaday Waxaa wax ka beddel lagu sameeyay sida ku cad Sharci Lamb.
Markii ay jabhadihii hubaysnaa dalka ka dilaaceen kana hor yimadeen xukuumaddii ciidanka isla markaana ay dalbadeen in dalka laga hirgeliyo nidaam dimuqraadi ah, lana laalo nidaamka shuuciga ah ee awooddi oo dhan siiyay hal xisbi, kolkaas ayay garwaaqsatay xukuumaddii ciidanku in la sameeyo Dastuur ku dhisan nidaam dimuqraadi ah.
Kulan looga hadlayay Dastuurka ayay saxiixayaashii ku qabsadeen Addis Ababa, iyaga oo aanan ku casuumin xubnaha labada guddi ee dastuurka. Guddi Farsamo oo aan xubnihiisa la shaacin ayaa la sameeyay waxa uuna dib u eegid ku sameeyay Dastuurka, waxayna saxiixeyaashii ku dhawaaqeen in ay isku afgarteen arrimihii ay isku maan-dhaafsanaayeen ee Dastuurka. Guddiga farsamo ooku shirayay -muddo laba isbuuc ah- Magaalada Nairobi ayaa mar labaad dib-u-eegis ku sameeyay qaar kamid ah qodobada dastuurka kahor inta aanan qoraalka ugu danbeeyay loo gudbinin saxiixayaasha.
Bishii Juun , saxiixeyaashii ayaa Nairobi ku ansixiyay Dastuurka KMG iyo afar habraac oo uu ku jiro habraaca samaynta gole matalo qaranka isla markaana aansixiyo Dastuurka. Golaha oo ka koobnaa ergo waxa la faray in ay u codeeyaan dastuurka iyaga oo aan waxba ka beddelin. Qabyotirka Dastuurkan KMG ah 1.
Baarlamaankii 9aad ayaa wax-ka-baddel ku sameeyey labo qodob oo kamid ah Dastuurka KMG, kuwaasoo kala ah Qod. Baarlamaanki 9aad ayaa Bishii Luulyo ansixiyay qaraar jiheynaya hannaanka dib u eegidda dastuurka. Baarlamaankii 9aadwuxuu la kulmey caqabado badan balse wuxuu soo saarey warbixin wadata xulashooyin la xiriira hannaanka dawladnimada, balse lagama doodin lamana ansixin.
Voodoogami Dawladaha Xubnaha ka ah Federaalka ee Ka jira Soomaaliya Xilka Golaha Shacbigu waa in uu matalo shacabka Soomaaliyeed, si ay uga qayb-qaataan xeerdejinta iyo oggolaanshaha miisaaniyadda qaranka iyo dhammaan kharashyada xukuumadda, kormeeridda hawlaha dawladda iyo gudashada dhammaan xilalka kale ee uu Dastuurku u xilsaaro. Sharci federaali ah ayaa tilmaami doona qaabdhismeedka ay u raaci doonaan dawlad-goboleedyadu awood-wareejin daatuurka oo ay dawladaha hoose ku wareejinayso xilalka. Este tipo de grafica semilogaritmica es la forma mas simple para determinar el tiempo de. Company Media Kit Contact Scoop.